Play FLV on Android - Nyefee na-egwu YouTube video on Android "
Otú nyefee na Play YouTube FLV on Android
> Resource> Android> otú nyefee na Play YouTube FLV on Android
YouTube, dị ka nnukwu online video nkekọrịta saịtị, aghọwo akpa oke ka ndị mmadụ chọta music, videos, TV na-egosi na ndị ọzọ. Ma usoro nke niile videos ebe a bụ FLV, nke nwere ike ghara egwuri na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Mgbe ahụ, olee otú ị pụrụ isi nyefee ma kpọọ YouTube FLV vidiyo na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba? Ọ bụrụ na e dị otú ahụ a ngwá ọrụ na-nwere ike tọghata ma nyefee FLV ka Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, ọ ga-abụ kediegwu! Ị bụ kechioma, ebe a na-abịa Wondershare MobileGo for Android, a ọkachamara Android njikwa, nke nwere ike inyere iji tọghata na nyefee FLV, WMA, AVI na ọtụtụ video formats gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ka nwere a na-agbalị ebe a.
Download a Android njikwa gị PC.
Cheta na: MobileGo for Android n'ụzọ zuru ezu na-akwado ọtụtụ Android ekwentị ma ọ bụ tebụl. Ebe a, ị nwere ike ịlele nza nke na-akwado Android ngwaọrụ na-akwado Android OS.
Olee otú igwu egwu FLV on Android
Na mbụ, na-ahapụ 'anya na mpio njikọ mgbe launching a Android faili na gị PC.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ Android ekwentị / mbadamba ka PC site na eriri USB ma ọ bụ Wi-Fi
Ugbu a, ma jiri eriri USB ma ọ bụ Wi-Fi jikọọ gị Android ekwentị gaa na PC. Nke a Android Manager ga ịchọpụta Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ozugbo. Mgbe ahụ, gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na-egosi elu na-amalite window.
Nzọụkwụ 2. Play YouTube na android ekwentị ma ọ bụ mbadamba
Mgbe ahọrọ "Videos" ke hapụrụ sidebar na-egosi video window. Tupu Nyefee na converting FLV videos, ị nwere ike họrọ a video mma. Na elu nri akuku, pịa abụọ akara ngosi. Na esiri-ala menu, họrọ "Setting"> "Video Nchigharị". họrọ gị chọrọ video mma.
Ekem, ke video window, pịa "Tinye" na-egosi faịlụ nchọgharị window. Ịnyagharịa ka nchekwa ebe ị na-azọpụta FLV videos. Họrọ videos ị chọrọ na pịa "Open" nyefee ha.
Mgbe ebufe FLV videos, ị nwere ike ịnweta a dee na-agwa gị ihe nkiri ị na-enyefe na-anaghị akwado site Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Mgbe nke a mere, i kwesịrị iji tọghata ha maka ekwentị gị. Họrọ "Ee" iji tọghata FLV videos. Ha ga-kpọmkwem atụkwasịkwara gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba mgbe akakabarede.
Ị pụrụ ịhụ na usoro nke ntọghata na nyefe. Mgbe ọ mere, ị nwere ike ịlele videos na video window. Na ị na-nwere ike wepu videos site na-ahọpụta obere vidiyo na pịa "Hichapụ" n'elu menu.
Ebe i nwere ike na-enwe gị videos na gị Android ekwentị ugbu a. Ọzọkwa, Wondershare MobileGo for Android nwere ike inyere nyefee foto na tọghata music gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba, nakwa dị ka ndabere kọntaktị gị na SMS n'etiti ekwentị gị na kọmputa.
Chọrọ nwere mma nghọta nke ndị nkuzi? Dị nnọọ na-ekiri ndị video.
E nwekwara ihe ọzọ ụzọ ka ị na-egwu YouTube vidiyo na Android ekwentị - Wondershare Player maka Android. Na ya, ị na-adịghị ibudata ọ bụla ọzọ na-eji ngwa na-ekiri YouTube videos online. Iji zọpụta gị ego gị, ị pụrụ ọbụna cache videos ma na-ekiri ha na-anọghị n'ịntanetị. E wezụga na, ọ na-akwado dị iche iche na-ewu ewu video formats gụnyere FLV. Ya mere ọ bụrụ na ị na ebudatara dị iche iche YouTube vidiyo na ekwentị gị, dị nnọọ ịwụnye a ọkpụkpọ na-enwe seamlessly playback ọganihu!
Họrọ ụzọ kacha mma maka gị onwe gị, na-enwe gị YouTube videos na gị Android ekwentị mfe ke laa ugbu a!
Ịbụ maara oru Spotify adịchaghị Android
Top 15 Samsung enyefe mkpa ka ị mara
Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site Motorola Cell ekwentị mkpanaaka na
Olee otú ndabere Samsung Galaxy Cheta effortlessly